सुपर लिगको पहिलो खेलमा इंग्ल्यान्ड विजयी - सबै खेल
सुपर लिगको पहिलो खेलमा इंग्ल्यान्ड विजयी
१६ श्रावण २०७७, शुक्रबार १५:०२ July 31, 2020 शंकर लामिछाने	0 Comments
विश्वकप सुपर लिगको पहिलो खेलमा विश्व च्याम्यियन इंग्ल्यान्ड विजयी भएको छ । सन् २०२३ मा भारतमा हुने एकदिवसीय विश्वकपको छनोटको रुपमा रहेको आइसीसी विश्वकप सुपर लिग अन्तर्गतको सिरिजको पहिलो खेलमा इंग्ल्यान्डले आयरल्यान्डलाई ६ विकेटले जितेको छ ।
बिहीबार साउथह्याम्पटनमा भएको खेलमा पहिला ब्याटिङ गर्दै आयरल्यान्डले दिएको १७३ रनको सामान्य लक्ष्य इंग्ल्यान्डले २७.५ ओभरमा ४ विकेट क्षतिमा भेट्टायो । इंग्ल्यान्डको जितमा साम बिलिङ्सले अविजित ६७ रन बनाए भने कप्तान इओन मोर्गनले पनि नटआउट ३६ रन बनाए । विलिङ्सले ५४ बल खेल्दै ११ चौका प्रहार गरे भने ४० बल खेल्दै ४ चौका र २ छक्का प्रहार गरे । आयरल्याण्डका लागि क्रेग योङले २ विकेट लिए ।
SOUTHAMPTON, ENGLAND – JULY 29: The Ireland squad pose forasocially distanced team picture ahead of the Royal London ODI series against England at Ageas Bowl on July 29, 2020 in Southampton, England. (Photo by Stu Forster/Getty Images for ECB)
त्यसअघि रोस बउल स्टेडियममा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको आयरल्यान्ड इंग्लिस बलरको कसिलो बलिङ सामु टिक्न नसक्दा ४४.४ ओभर खेल्दै १७२ रनमा अलआउट भयो ।
डेब्युटान्ट कर्टिस काम्परले अविजित रहँदै अर्धशतक प्रहार गरेपनि अरु खेलाडीले राम्रो खेल्न सकेनन् । काम्परले ११८ बल खेल्दै ४ चौका प्रहार गर्दै ५७ रन जोडे । नवौं नम्बरमा ब्याटिङ गरेका एन्डी म्याब्रिनेले ४० रन योगदान गरे । उनले ४८ बल खेल्दै ३ चौका र १ छक्का प्रहार गरे । काम्पर र म्याकब्रिनेले आठौं विकेटका लागि ६६ रनको साझेदारी गरेका थिए ।
आयरल्यान्डलाई अलआउट गर्न इंग्ल्यान्डका लागि डेविड विलीले ५ विकेट लिए । उनले ८.४ ओभर बलिङ गर्दा २ ओभर मेडन राख्दै ३० रन खचिए । साकिव महमुदले २ विकेट लिए । दोस्रो ओडिआई शनिवार हुनेछ ।
← फिफा अध्यक्षमाथि फौजदारी अभियोगमा मुद्दा
दशरथ रंगशालामा विश्वकप छनोटको खेल नहुने ! →
बंगलादेशले टस जितेर फिल्डिङ रोज्यो, इंग्ल्यान्ड ब्याटिङमा
२५ जेष्ठ २०७६, शनिबार १५:१३ महेश कार्की 0
२५ पुष २०७६, शुक्रबार १७:४१ महेश कार्की 0
२९ बैशाख २०७६, आईतवार २२:३३ महेश कार्की 0